Iindaba-Athini amanyathelo okunciphisa ukusetyenziswa kwe-electrode
Okwangoku, amanyathelo aphambili okunciphisa ukusetyenziswa kwe-electrode yile:
Ukulungiselela iiparameter zenkqubo yokuhambisa umbane. Iiparamitha zonikezelo lwamandla zezona zinto ziphambili ezichaphazela ukusetyenziswa kwe-electrode. Umzekelo, kwisithando somlilo esingu-60t, xa i-voltage esecaleni ye-410V kunye ne-23kA yangoku, ukusetyenziswa kwangaphambili kwe-electrode kunokuncitshiswa.
I-elektrode edityaniswe namanzi edityaniswe namanzi yamkelwa luhlobo olutsha lwe-electrode ephuhliswe phesheya kule minyaka idlulileyo. I-electrode edibeneyo epholileyo yamanzi yenziwe ngecandelo le-tube ephezulu yensimbi epholileyo kunye necandelo le-graphite elisezantsi, kunye necandelo elipholileyo ngamanzi elibhekiselele kwi-1/3 yobude be-electrode. Kuba akukho bushushu buphezulu be-oxidation (i-graphite oxidation) kwicandelo le-tube yensimbi epholileyo yamanzi, i-electrode oxidation iyancitshiswa, kwaye icandelo leetyhubhu yensimbi epholileyo ngamanzi igcina unxibelelwano oluhle kunye ne-gripper. Ukusukela ukuba umsonto wecandelo elipholile ngamanzi kunye negraphite yamkela uhlobo olupholileyo lwamanzi, imilo yayo izinzile, ngaphandle kokonakala, kwaye iyakwazi ukumelana netorque enkulu, ephucula amandla ojongano lwe-electrode, oko ke kunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kwe-electrode.
Anti-igcwala indlela yamanzi spray grafayithi electrode yamkelwe. Ngenxa yokusetyenziswa kwee-electrode kwinkqubo yokunyibilikisa, amanyathelo obuchwephesha wokutshiza amanzi e-grafite kunye nokuthintela i-oxidation kuyamkelwa, oko kukuthi, isixhobo sokutshiza amanzi samkelwa phantsi kwe-griper ye-electrode yokutshiza amanzi kumphezulu we-electrode, ke ukuba amanzi ehla ezantsi kumphezulu we-electrode, kwaye umbhobho wesangqa usetyenziselwa ukuvuthela umoya ocinezelekileyo ukuya kumphezulu wangoku ngaphezulu komngxuma we-electrode wesigqubuthelo somlilo, ukwenzela ukuba amanzi atomize. Sebenzisa le ndlela, ukusetyenziswa kwetoni yentsimbi ye-elektrode kwehle ngokucacileyo. Itekhnoloji entsha isetyenziswa okokuqala kwiziko lombane elinezixhobo eziphezulu. Indlela yokutshiza amanzi ye-electrode ilula, kulula ukuyisebenzisa kwaye ikhuselekile.
Itekhnoloji yokwaleka komhlaba kwe-Electrode. Itekhnoloji yokutyabeka i-Electrode yindlela elula nesebenzayo yokunciphisa ukusetyenziswa kwe-electrode.
Izinto ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zokutyabeka i-electrode zii-aluminium kunye nezinto ezahlukeneyo zeceramic, ezinamandla okumelana ne-oxidation kubushushu obuphezulu kwaye zinokunciphisa ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwe-oxidation kwicala elisecaleni le-electrode.
Sebenzisa idiprode. I-dip electrode kukuntywila i-electrode kwiarhente yemichiza kwaye yenze umphezulu we-electrode unxibelelane nearhente ukuphucula ukuxhathisa kwe-electrode kubushushu obugqithisileyo. Ukusetyenziswa kwe-electrode kuncitshiswe nge-10% ~ 15% xa kuthelekiswa ne-electrode yesiqhelo.